Ngokombiko we-RMB Company, ukulindela okuhle emhlanganweni we-ECB ngoLwesine futhi, kancane kancane, emhlanganweni ofanayo weBhange laseNgilandi, kuvumela abahlanganyeli bemakethe ukuba banganaki izindaba ezithile ezimbi. Isibonelo, enye yalezi zinsuku yaziwa ukuthi iSlovenia, eyajoyina indawo ye-euro ngo-2007, ingaba yizwe lesithupha le-euro, elifaka isicelo sokusiza ngezezimali e-EU. Izinkinga ngebhajethi yezwe zaqala ngemuva kokunikeza usizo lukahulumeni kwisikhulu esikhulu seSlovenia seNova Ljubljanska Banka dd uJanez Janša wathi iSlovenia ingozi yokuphindaphinda "isimo seGreki", kodwa uhulumeni "wenza konke ukuze athole indlela yokuphuma" futhi agweme isidingo sokufuna usizo lwamazwe ngamazwe. Endaweni ethile esiyizwile kakade, akunjalo?
Umnyango we-Analytical we-RMB Company ukhumbuza ukuthi namuhla iholidi lezwe elibaluleke kunazo zonke - uSuku Lokuzimela - luzogubha e-USA. Kulokhu, abahlanganyeli bemakethe "banqatshelwe" imvelo yemvelo yokudoba ngokushintsha inani lemisebenzi emkhakheni wangasese kusuka ku-ADP nakwamanye amafutha angcolile avela eMnyangweni wezeMelika wase-US. Ukuntuleka kwemisebenzi engxenyeni yamabhange aseMelika nabatshalizimali kuyothinta futhi ukuhweba lwemali okuzokwenzeka namuhla ezimweni "ezimakethe ezincane". Abahlanganyeli bemakethe bazoqhubeka nokulandela imibono emhlanganweni wekusasa we-ECB neBhange laseNgilandi. Okucacile kufanele kuqaphele ukushicilelwa kwenani lenkomba ye-PMI yomkhakha wezinsizakalo waseBrithani enkulu ngo-12: 30 (isikhathi saseMoscow).
Izinga lemali elilodwa laseYurophu ngosuku oludlule cishe aluzange lishintshe kusukela ezingeni lika-1.2600, nakuba ukuziphatha kwemakethe okungeyona engozini ephelele kubonakala ngokukhula okulinganisako phakathi kombono okhulayo wemakethe ukuthi amabhange aphakathi azophoqelelwa ukumemezela izinyathelo ezintsha zokusekela labo ababhekene nezimali nezomnotho Ucwaningo lwezomnotho. Lokhu kuphakamisa ukuthi isilinganiso esinqunywe yi- European Central Bank, okulindeleke ngoLwesine, akunakwenzeka ukuba sibe nesisusa sokubonga kwe-euro, okungeyona into emangalisa ngayo.
I-pound sterling yawela ngaphansi kuka-0.2% kuya ku-1.5670 ku-pair GBP / USD ngokuya ngemuva kwedatha ebuthakathaka ohlwini lwama-PMI emkhakheni wokwakha, ngoJuni owayengu-48.2 emva kukaMeyi 54.4 (inani elingezansi kwamaphesenti angu-50 libonisa ukwehla komsebenzi wezomnotho (Ukukhiqizwa) emkhakheni oqondene), nakuba izibalo zokubolekisa abantu ngabanye kanye nezindleko zokubolekwa kwemali zenziwa ukuthi zithandeke kakhulu.
Izindleko ze-European DAx30, CAC40 kanye ne-FTSE100 zengeze u-1.26%, 0.96% no-0.83% ngokulandelana, ama-"amantombazane" aseMelika "S & P500 noDow Jones" anesilinganiso esingu-0.62% no-0.56% ngokulandelana. Idatha kuma-oda wezimboni e-US avuke okokuqala ezinyangeni ezingu-3, futhi asekela isimo sengqondo esihle.
Inkampani ye-Rmb: Abathengi Bokugxila KuSinqumo Se-ECB
Ukutshala kuphi imali encane nokuthi ungayithola kanjani?
UWarren Buffett ungumtshali omkhulu kakhulu emhlabeni. Biography, izincwadi, amazwi, indlela "i-oracle evela ku-Omaha"
Izimali ezinamandla, noma kuphi ukutshala imali ukulinganisela izingozi bese uthole imali eqinisekisiwe.
I-Royalmaxbrokers: I-Traffic Izoba
Fat burning isobho. Izibuyekezo. iresiphi
Apple Tree "injabulo": incazelo, izithombe, izibuyekezo
Club wona, horsetails, Izinhlobo isakhiwo umehluko. Njengoba uma umuntu ebhema horsetails wona club kanye Izinhlobo?
Sibhedlela "Rus" (Anapa): Ukwelashwa, izibuyekezo, izithombe
Puncher "Makita 2450": ukubuyekezwa. Rotary Hammer Makita 2450: Izici, Inani